အခုတလော ကျောင်းမှာ ပျားပန်းခတ်မျှ စည်းကားနေတယ်။ အဖြူတွေရော အမဲတွေရော အဖြူတစ်ဝက် အမဲတစ်ဝက်တွေရော မဖြူ့တဖြူ မမဲတမဲတွေရော ဟာ ဘာတွေမှန်းကို မသိဘူး။ စုံနေတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ အများဆုံးကတော့ အမဲ။ ကြာရင်လည်း ကုလားမြို့တော် ဖြစ်တော့မှာပါ။ ပြီးတော့ ရောတောရှိ (ဂျပန်) တွေလည်း များပါ့။ ကြာရင် ဂျပန်စကားပြောနိုင်တော့မယ် ထင်တာပဲ :) အရင်တုန်းကတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဂျပန်စကားလိုလို ဘာလိုလို စကားတွေကို ရှောက်ပြောကြတယ် အချင်းချင်းနှုတ်ဆက်ကြရင် အူရှီးတို့ပါတို့ပေါ့ :) နှုတ်ဆက်ခံရတဲ့ လူကတော့ပြန်ပြောတယ် ချူရှီး :) ဒါတွေက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အမြဲနောက်ပြောင်ရင်း ပြောတတ်တဲ့စကားတွေ :) ဂျပန်နဲ့ ဆက်စပ်မိပြီး သတိရသွားတာ။ ဆိုင်တော့ သိပ်မဆိုင်ဘူး။
ကျောင်းသားကဒ် ပြဿနာတက်တာလည်း ဒီနေ့မှ ပြီးသွားတယ်ဗျား။ ပိုက်ဆံသွင်းပြီးတာကို ကျောင်းသားကဒ်က Building Access လုပ်လို့မရဘူး။ Facilities တွေကတော့ သုံးလို့ရတယ်။ အဲဒါနဲ့ TowerBuilding က Main Admin ကိုသွားမေးတယ်။ မောင် Admin များက ပြန်ပြီးလမ်းညွှန်ပြန်ရော။ Undergraduate Center ကိုပြန်ကြွပါတဲ့။ အဲဒီကိုလည်း ကြွသွားရော ထောက်လှမ်းရေးနဲ့တွေ့တော့တာပဲ။ ဟိုဟာပြ ဒီဟာပြနဲ့။ Program တွေထဲမှာ ရှိမရှိ ပိုက်ဆံသွင်းမသွင်း ပြန်စစ်နေရော။ သူနဲ့ပြီးမလားမှတ်တယ်။ ပိုဆိုးသွားတယ်။ ပြဿနာက Enrollment မလုပ်ခဲ့လို့တဲ့။ ဒါနဲ့ Stapleton House ကိုသွားပြီး Enroll ပြန်လုပ်။ ပြီးမှ ID Card section ကိုရောက်သွားတယ်။ အဲဒီကျမှ ကျေးဇူးရှင်များက Active ဖြစ်အောင် ပြန်လုပ်ပေးလိုက်တယ်။ မဟုတ်ရင် Building ထဲကိုဝင်ဖို့ Security တွေကိုပဲ ပြောပြောနေရတယ်။ ဒါတောင် သိပ်မကြည်ချင်ဘူး။ လူပဲ ဗုံးခွဲမဲ့သူလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့။ အတော်ပလီတဲ့ Security တွေ။ ပြီးတော့ ဒီနှစ်ရက်အတွင်း ပန်းကမ္ဘာကိုလည်း အလည်ရောက်ခဲ့သေးဗျား။ အသိအိမ်တစ်အိမ်မှာ အမဲသားစွတ်ပြုတ် သောက်လိုက်တာ လူလည်း အားရှိမလာပဲ ပန်းကမ္ဘာရောက်ပြီး အားပြတ်မလိုဖြစ်သွားတယ်။ အခုတော့ ဆေးသောက်လိုက်လို့ ပြန်ဂွတ်သွားပြီ။ တော်သေးတယ်။ ကျောင်းမှာတော့ အားလုံး တက်တက်ကြွကြွတွေ ဖြစ်နေကြတယ်။ အစမို့လို့နေမှာပါ။ စာမေးပွဲနီးမှ မျက်နှာလေးတွေ သေချာလိုက်ကြည့်အုံးမယ်။ နှစ်စတုန်းက တွေတဲ့မျက်နှာ နဲ့ တူသေးလားလို့ :) မနက်ဖြန်ကတော့ ၁ နာရီမှပဲသွားရမယ်။
ဒါနဲ့ စကားမစပ် မေးရဦးမယ် ... Computer Science နဲ့ Computing နဲ့ ဘယ်ဟာက ပိုပြီး ဂွတ်လဲ။ အကြံဥာဏ်လေးများ ရှိပါက Comment မှာ ရေးပေးပါလား။ သိုင်းကျူး :)
NLS 7:18 pm
Computer Scinece is common. If you are really good in Math and confident yourself, do it Computing.
Atumashi Kyaung Temple - Mandalay
ဝေထွန်း ငါ မုန့်လဲ မစားလိုက်ရဘူး :(
Fees, Interview & Wimbledon
Fancy Transparent Testing
မြန်မာ ၀ီကီ လာပြီ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ... အားပေးတဲ့မိတ်ဆွေ
မြန်မာသမိုင်းကို နိုင်ငံတကာမှ လေ့လာနိုင်ပြီ
ဟူး ... ခက်ပါလား
အလွမ်းခရီးသည် - အငဲ
လှိုက်လှိုက် လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်ရှိခြင်း